ဂျပန်ရောက်နိုင်ငံခြားသားများ ရင်ခုန်နေကြတဲ့ ၇.၉ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » ဂျပန်ရောက်နိုင်ငံခြားသားများ ရင်ခုန်နေကြတဲ့ ၇.၉
ဂျပန်ရောက်နိုင်ငံခြားသားများ ရင်ခုန်နေကြတဲ့ ၇.၉
Posted by yuki on Jun 22, 2012 in Copy/Paste |2comments
ဇူလိုင်လ ၉ ရက်နေ့ကနေစတင်ပြီး အသက်ဝင်ကျင့်သုံးတော့မယ့် နိုင်ငံခြားများကို တင်းတင်းကြပ်ကြပ် ကိုင်တွယ်တော့မယ့် Zairyu Card(သို့မဟုတ်)I.C Card ဂျပန်ရောက်မြန်မာများလဲ ရင်ခုန်စွာနဲ့စောင့်နေကြပါတယ်။
ဒီဥပဒေပြဌာန်းဖို့ကို ၂ဝဝ၉ ခုနှစ် လဆန်းပိုင်းကတည်းက လစ်ဘရယ်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီLDP (အဆိုပါအချိန်တုန်းက အာဏာရ အစိုးရဖြစ်ပြီး ယခုအတိုက်အခံပါတီ)က အထက်လွှတ်တော်ကို တင် သွင်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ တင်သွင်းရတဲ့အကြောင်းအချက်တွေကတော့-
ပြည်တွင်းအုပ်ချုပ်ရေးကို ပိုမိုအထောက်အပံ့ပေးနိုင်မယ့် ဝန်ဆောင်မှု မျိုးနှင့် အကြမ်းဖက်လုပ်ဆောင်မည့် နိုင်ငံခြားသားများ၏ရန်မှ ကာကွယ် နိုင်ရန်အတွက်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဒါ့အပြင် အခြေချနေထိုင်ခွင့်ရရှိထားသူ နိုင်ငံခြားသားများ၏အခြေအနေကိုလည်း ဗဟိုအစိုးရမှ တိုက်ရိုက်ထိန်းချုပ် ပြီး ဘာတွေလုပ်နေတယ်၊ ဘယ်သူနဲ့ဘယ်မှာနေထိုင်နေတယ် (ဟန် ဆောင်လက်ထပ်ထားခြင်းကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်သည်) ချမှတ်ပြဌာန်းထားတဲ့ ဥပဒေနှင့်ညီလျော်စွာ နေ-မနေ(ရာဇဝတ်မှုကျုးလွန်ခြင်းရှိ-မရှိ)ပေးဆောင် ရမည့် ဝင်ငွေခွန်(အခွန်ဆောင်-မဆောင်)နဲ့ အစိုးရအပေါ် လိမ်လည်ပြီး နေထိုင်လုပ်ကိုင်ခြင်းရှိ-မရှို(ဗီဇာအတုပြုလုပ်ခြင်း၊ လိမ်လည်ပြီး နေထိုင်ခွင့်ရ ယူထားခြင်း၊ ထောက်ပံ့ကြေးယူပြီး အလုပ်ခိုးလုပ်နေခြင်း၊ သတ်မှတ်ချိန် ထက်ကျော်လွန်ကာ အလုပ်လုပ်နေခြင်းနှင့် work Permitt Visa ဖြင့် တခြားတနေရာတွင် တရားမဝင်အလုပ်လုပ်ကိုင် နေခြင်းကိုဆိုလိုခြင်း ဖြစ်သည်)တို့ကို အလွယ်တကူစုံစမ်းသိရှိနိုင်ဖို့အတွက် လို့ ဆိုပါတယ်။
LDPပါတီက ရေးဆွဲတင်သွင်းခဲ့တဲ့ နိုင်ငံခြားသားထိန်းချုပ်မှုဆိုင်ရာ ဥပဒေသစ်ကို လက်ရှိအာဏာရပါတီဖြစ်တဲ့ ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ DPJ(အဆိုပါအချိန်တုန်းက အတိုက်အခံပါတီအဖြစ်နှင့်သာ တည်ရှိသေး)နဲ့ New Komeito(ဘုန်းကြီးပါတီ) ပါတီတို့က သဘောတူထောက်ခံခဲ့လို့ ၂ဝဝ၉ ခုနှစ် ဇူလိုင်(၁၅)ရက်နေ့မှာ အတည်ပြုနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ပြင်ဆင်လိုက်သော ဥပဒေသစ်အရ လက်ရှိကိုင်ဆောင်နေတဲ့ နိုင် ငံခြားသားမှတ်ပုံတင်ကဒ်ဥပဒေကို ဖျက်သိမ်းတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့ပြင် လူဝင်မှုကြီးကြပ် ရေး၏ထိန်းချုပ်မှုပုံစံနှင့် နေထိုင်မှုမှတ်ပုံ တင်ဥပဒေများကို လုံးဝပြောင်းလဲပစ်မှာဖြစ်ပြီး နိုင်ငံခြားသားများနှင့် ပတ်သက်သည့် အချက်အလက်များ အားလုံးကို ဗဟိုအစိုးရက ကိုင်တွယ်မှာဖြစ်ပါတယ်။
ဥပဒေကြမ်းရေးဆွဲရာ၌ ကူညီခဲ့သူ DPJမှ ဥပဒေပြုပုဂ္ဂိလ် ‘ရီဆူအို ဟို ဆိုကာဝါ’ကတော့ ”နိုင်ငံခြားသားတွေ ဘယ်လောက်ရှိလဲ၊ ဘယ်မှာနေ လဲဆိုတာတွေ သိဖို့လိုပါတယ်။ ဒီအချက်အလက်တွေစုစည်းပြီး တရားရေး ဝန်ကြီးဌာနမှာ ထားရှိဖို့လည်း အင်မတန်လိုအပ်ပါတယ်။ ဒါမှသာ သာမန် ဂျပန်ပြည်သားတစ်ဦးလိုပဲ ဥပဒေလိုက်နာပြီး ကောင်းကောင်းမွန် မွန်နေထိုင်တဲ့ နိုင်ငံခြားသားတွေ ပြန်ပို့မခံရအောင် ဒါမှမဟုတ် ပုန်း လျှိုပြီး မနေရအောင် ကျနော်တို့ဆောင်ရွက်သွားမှာပါ”လို့ ဆိုပြန်ပါတယ်။
ဒီဥပဒေကို စတင်ပြဌာန်းတာက အမေရိကန်ပါ။ ၉-၁၁ ဖြစ်ပွားပြီး သူ့နိုင်ငံအတွင်း နိုင်ငံခြားသားအကြမ်းဖက်သမားရန်(အထူးသဖြင့် အစွန်းရောက် အစ္စလာမ်)ကာကွယ်ဖို့နဲ့ နိုင်ငံတော်လုံခြုံရေးအတွက်ပါ။နောက် ဥရောပနိုင်ငံတွေမှာပါ ဆက်လက်ကျင့်သုံးပါတယ်။
ဥပမာ- အမေရိကန်နိုင်ငံမှာဆိုရင် နိုင်ငံခြားရော နိုင်ငံသားပါ တစ်ပြေးညီ ကျင့်သုံးပါတယ်။
အင်္ဂလန်ကျတော့ မနှစ်က အစွန်းရောက် အစ္စလာမ်တွေရဲ့ ဗုံးဖျောက်ခွဲမှုအပြီး ပညာလာသင်တဲ့သူရော၊ နိုင်ငံခြားသား ကျောင်းသူ/သားများကို လုံးဝ အလုပ်လုပ်ခွင့် မပြုတော့ပါဘူး။ အာမခံထားတဲ့သူ(စပွန်ဆာပေးသူ)က နိုင်ငံခြားသား ကျောင်းသူ/သားရဲ့ စားရိတ်စကကို ခံရပါတယ်။ ကျောင်းပြီးတာနဲ့ နေရပ်ပြန်ခိုင်းပါတယ်။ ဒါကလည်း ခုနကပြောသလို အစွန်းရောက်တွေကြောင့် ဖြစ်သွားတာပါ။အာရှမှာတော့ မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံက စတင်ကျင့်သုံးပါတယ်။
အသစ်ထုတ်မယ့် zairyu card ကိုကိုင်ဆောင်ခွင့်ရမယ့်သူများ၊ထုတ်ပေးရန်မလိုအပ်သူများ၊ထုတ်မပေးမည့်သူများဆိုပြီး ၃မျိုးခွဲထားပါသေးတယ်။
အဓိကပြဿနာကတော့ အခုဥပဒေအသစ်ကြောင့် အလုပ်လုပ်ခွင့်တွေကို သတ်မှတ်ထားတဲ့အချိန် ဥပမာ- ကျောင်းသားဆိုလျင် တစ်ပတ် ၂၈ နာရီ၊(ကျောင်းသားတွင် ထပ်ခွဲထားပါသေးတယ်။ တပတ် ၂၈ အလုပ်လုပ်ခွင့်ရှိတဲ့ကျောင်းသားနဲ့၊ Ryugakusei(留学生)လို့ခေါ်တဲ့ ပညာလေ့လာဆည်းပူးသင်ကြားသူကျောင်းသား၊(留学生 သမားများကတော့ အလုပ်လုပ်ခွင့် ကန့်သတ်နိုင်ပါတယ်။ အဆိုပါပညာသင်များကို အာမခံပေးပြီး ခေါ်ယူထားတဲ့ မိသားစုက အစအဆုံး တာဝန်ယူရမှာဖြစ်ပါတယ်)တစ်ပတ် ၂၈ နာရီသာ အလုပ်လုပ်ခွင့်ရှိတဲ့ကျောင်းသားကို အလုပ်ရှင်က ထိုထက်ပို၍ အလုပ်ခန့်အပ်ထားပါက-
(က)ယခုဥပဒေသစ်တွင် ထောင် ၃ နှစ် (သို့) ဒဏ်ငွေ ယန်းသောင်း ၃၀၀ ပေးဆောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ အလုပ်ချိန်ပိုလုပ်တဲ့ကျောင်းသားကိုလည်း ပထမအကြိမ် ဒဏ်ငွေ သောင်း ၂၀ တပ်မှာဖြစ်ပါတယ်(မဆောင်နိုင်လျင် ထောင်ချပြီး ပြန်တော်ပြန်ပို့မှာဖြစ်ပါတယ်)
(ခ) တစ်ပတ်လျင် အလုပ်ချိန် ၂၈ နာရီသာလုပ်ခွင့်ရှိသောကျောင်းသားတစ်ယောက်အနေဖြင့် တစ်ပတ်ထဲတွင် A ကုမ္ပဏီ၌ အလုပ်ချိန် ၂၈ နာရီ၊ B ကုမ္ပဏီ၌ အလုပ်ချိန် ၂၈ နာရီ၊ အစရှိသဖြင့် လုပ်ကိုင်သူဖြစ်ပါက ယခင်က မသိခဲ့သော်လည်း ယခုစနစ်သစ်တွင် Jūminhyō (住民票)ကြောင့် အားလုံးပေါ်မှာဖြစ်ပါတယ်။
ဒါမျုိုးတွေ့ရှိသွားပါက အလုပ်ချိန်ပိုလုပ်နေသည့် ကျောင်းသားကိုသာ အရေးယူမှာဖြစ်ပြီး ဒဏ်ငွေ(သို့)ထောင်(သို့)ပြည်တော်ပြန်ပို့မှာဖြစ်ပါတယ်။
Work Visaသမားဆိုလျင် မိမိအားခေါ်ခန့်ထားသည့် ကုမ္ပဏီမှလွဲ၍ တခြားတွင် လုပ်ခွင့်မရှိပါ။အလုပ်သင်(Training Visa)၊ အလုပ်လုပ်ခွင့်မရရှိသေးသည့်သူများ( ဗီဇာ ၃ လအထက်ရှိသော်လည်း လ၀ကထံတွင် အလုပ်လုပ်ခွင့်စာရွက်မရှိရှိသေးသူများ၊ ဥပမာ- ဗီဇာလက်ဝယ်ရှိပြီး ဒုက္ခသည်လျှောက်ထားသူများကို လ၀ကမှ ပထမသက်တမ်း ၆ လတွင် အလုပ်လုပ်ခွင့်စာရွက်ထုတ်မပေးသေးခြင်း၊ မှီခိုဗီဇာဖြစ်သော်လည်း အလုပ်လုပ်ခွင့်စာရွက်မရှိသေးသူများ၊ ဗီဇာအပြောင်းအလဲကြောင့် အလုပ်လုပ်ခွင့် ယာယီဆိုင်းငံ့ထားခံရသူများ) လုံးဝ အလုပ်လုပ်ခွင့်မရှိတော့ပါ။ စစ်ဆေးတွေ့ရှိပါက ဒဏ်ငွေ(သို့)ထောင်(သို့)ပြည်တော်ပြန်ပို့မှာဖြစ်ပါတယ်။
အေးဂျူး(permanent resident)永住民၊ တေးဂျူး(Long term Resident)定住者၊ ဂျပန်လူမျိုးနှင့်လက်ထပ်ထားပြီး အေးဂျူး(သို့)တေးဂျူးရရှိထားသူများ၊ ဒုက္ခသည်အဖြစ် အသိအမှတ်ပြုခံထားရသည့်သူများ၊ (R ဗီဇာ၊ S S ဗီဇာနှင့် Designated Activities(တော့ခုတေး)များကတော့ အလုပ်လုပ်ချိန်ကို မိမိလုပ်နိုင်သလောက် အကန့်အသတ်မရှိလုပ်နိုင်ပါတယ်။
အထူးသတိပြုရမယ့်အချက်က အလုပ်ပြောင်းရွေ့လျင် (သို့)အိမ်ပြောင်း၊ နေရာပြောင်း၊ ဗီဇာအမျိုးအစားပြောင်းလျင် ဗဟိုအစိုးရ(လ၀က)ထံသို့ ၁၄ ရက်အတွင်း အကြောင်းသွားကြားရမှာဖြစ်ပါတယ်။
Haigusha(配偶者ビザ)လို့ခေါ်တဲ့ မှီခိုဗီဇာသမားလည်း အလုပ်လုပ်ခွင့်ရှိသူနဲ့ မရှိသူဆိုပြီး နှစ်မျိုးရှိပါတယ်။(ဥပမာ- Work Visaသမားရဲ့ ဇနီး(သို့)ယောကျာင်္းများဟာ အရင်ဥပဒေဟောင်းကတည်းက အလုပ်လုပ်ခွင့်မရှိပါဘူး။ အလုပ်လုပ်ချင်ရင် ဗဟိုအစိုးရ(လ၀က)ထံမှာ အကြောင်းပြချက်ပြောပြီး အလုပ်လုပ်ခွင့် တောင်းခံရမှာဖြစ်ပါတယ်)
-ဂျပန်လူမျိုးနှင့် လက်ထပ်ထားပြီး Haigusha(配偶者ビザ)လို့ခေါ်တဲ့ မှီခိုဗီဇာသာ ကိုင်ဆောင်ခွင့်ရှိသူကတော့ အလုပ်ချိန်အကန့်အသတ်မရှိ လုပ်ကိုင်ခွင့်ရှိပါတယ်။ သတိပြုရမယ့်အချက်က မိမိမှီခိုထားတဲ့ ဂျပန်အမျိုးသား ခင်ပွန်း(သို့)ဇနီး ဆုံးပါးသွားတယ်ဆိုရင်တော့ မှီခိုဗီဇာပျက်ပြယ်သွားပြီး ပြည်တော်ပြန်ရမှာပါ။
အားသာချက်တစ်ခုကတော့ (၁) ဂျပန်လူမျိုးနဲ့လက်ထပ်တယ်၊ ပထမဆုံး ၁ နှစ်သက်တမ်းရှိ Haigusha(配偶者ビザ) ရရှိတယ်။ နောက် တေးဂျူး(Long term Resident)定住者 လျှောက်တယ်၊ နောက်တဆင့် အေးဂျူး(permanent resident)永住民 အထိပါရရှိသွားသူဖြစ်ပါက လင်မယားကွဲသည်ဖြစ်စေ၊ ဇနီး(သို့)ခင်ပွန်း ကွယ်လွန်သည်ဖြစ်စေ အေးဂျူးဗီဇာနဲ့ပဲ ဂျပန်မှာနေခွင့်ရှိပါတယ်။
အေးဂျူးလျှောက်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီး အလွယ်ဆုံးရှင်းပြရမယ်ဆိုရင် ကျောင်းသားတစ်ယောက်ဆိုပါစို့။
ကျောင်းပြီးလျင် မိမိကိုခန့်အပ်မယ့် ကုမ္ပဏီတစ်ခုခုမှာ 就職၀င်လုပ်ရပါမယ်။ နောက် တေးဂျူးဗီဇာ…။ ဆိုမှတဆင့် အေးဂျူးလျှောက်မယ်ဆိုရင် တေးဂျူးဗီဇာသက်တမ်း ၁၀ နှစ်ရှိရပါတယ်၊ထိုနည်းအတူ Work ဗီဇာသမား၊ မှီခိုသမားများလည်း တေးဂျူးဗီဇာသက်တမ်း ၁၀ နှစ်ရှိရပါတယ်။အေးဂျူးလျှောက်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီး ကွန်းဗင်းရှင်းဒုက္ခသည်ဗီဇာ(R ဗီဇာ)တိုက်ရိုက်ရထားသူများ အားသာချက်ကတော့ တေးဂျူးဗီဇာ တန်းရပါတယ်။ (၂၀၀၇ ခုနှစ်အထိက ၁ နှစ် ၁ နှစ် ၃ နှစ်ဖြစ်ပေမယ့် ၂၀၀၇ ခုနှစ်နောက်ပိုင်းမှစပြီး ၃ နှစ်ဗီဇာ တန်းထုတ်ပေးပါတယ်) ထို့သူများ အေးဂျူးလျောက်မယ်ဆိုရင်တော့ တေးဂျူးဗီဇာသက်တမ်း ၅ နှစ်ရှိရင် လျှောက်ခွင့်ရှိပါတယ်၊(ပြစ်မှုကင်းရှင်းတယ်၊ အခွန်ကြေတယ်၊ နောက် ဂျပန်လူမှုပတ်ဝန်းကျင်အတွက်လည်း အကျိုးပြုမယ့်လူဆိုရင် ၆ လအတွင်း အေးဂျူးအဖြစ် အသိအမှတ်ပြုပါတယ်)။ဂျပန်လူမျိုးနှင့်ဖြစ်စေ၊ အေးဂျူး၊ တေးဂျူးအစရှိသူတို့နှင့် လက်ထပ်ထားသူများအနေဖြင့် သတိထားရမယ့်အချက်က လင်မယားအဖြစ် ၆ လကျော် အတူမနေကြောင်း လ၀ကသို့ အိမ်ထောင်ဖက်မှ သတင်းပို့လို့ဖြစ်စေ၊ သို့တည်းမဟုတ် လ၀ကမှ စုံစမ်းစစ်ဆေးတွေ့ရှိလို့ဖြစ်စေ သိရှိသွားပါက ဗီဇာရုပ်သိမ်းခံမှာဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီလို ဗီဇာရုပ်သိမ်းခံလိုက်ရတဲ့အတွက် မြို့နယ်ရုံးကလည်း Jūminhyō (住民票)ရုပ်သိမ်းမှာဖြစ်ပြီး ပြည်တော်ပြန်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
ခြွင်းချက်အနေနဲ့ – သင်ဟာ လင်မယားကွာရှင်းပေမယ့် ပိုင်ဆိုင်မှုကြောင့်ဖြစ်စေ၊ မိသားစုကိစ္စကြောင့်ဖြစ်စေ အမှုရင်ဆိုင်နေရပါက ၎င်းအမှုမပြီးပြတ်မခြင်း လက်ရှိဗီဇာကို ဆက်လက်ကိုင်ဆောင်ခွင့်ရရှိနေဦးမှာဖြစ်ပါတယ်။
သက်ဆိုင်ရာ မြို့နယ်ရုံးများတွင် ထောက်ပံ့ကြေးရယူထားများကတော့ အစကတည်းက လုံးဝ(လုံးဝ) အလုပ်လုပ်ခွင့်မရှိပါ။ ၇-၉ ဥပဒေသစ်မပြဌာန်းမှီကာလအထိက ဗဟိုအစိုးရ(လ၀က)မသိအောင် ခိုးကြောင်ခိုးဝှက် လုပ်နေကြသ်ာလည်း ဥပဒေသစ်အရ ခိုးလုပ်ရင် ဘူးပေါ်သလိုပေါ်မှာပါ။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ Jūminhyō (住民票) ကြောင့်ပါ။
ဒီဥပဒေအသစ်ဟာ ဂျပန်ရောက်မြန်မာများအတွက်တော့ ဆူနာမီထက်ပိုကြောက်ဖို့ကောင်းနေပါတယ်။
ဂျပန်ရောက်နေတဲ့ အဆက်ဟောင်းကြီးကို အမြန်ဆုံးမေးလ်ပို့ သတိပေးရမယ် ။
I have been trying to find out Japan Immigration rules for foreigners.
However, I have difficulties to find out in detail through any channel.
Now, I become to understand through your message from this site.
Please share any update information concerning their changes and new rules.
Haveahappy time !!!!